Qadka Internet-ka oo muqdisho cariirin ka galay. | KEYDMEDIA ONLINE
Qadka Internet-ka oo muqdisho cariirin ka galay.
Muqdisho (Keydmedia) - Magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya ayaa wixii kadanbeeyay galabnimadii Axada waxaa ka jiray cariiri xagga internet-ka ah kadib markii ay wax yeella gaartay shirkada lagu magacaabo Global Internet oo inta badan qadkeeda Muqdisho laga isticmaalo.
Xarunta ugu weyn Shirkdaasi ay Muqdisho ku leedahay ayaa waxa ay ku taallaa meel ku dhaw wadada Wadnaha, waxaana lashegay in ay ku dhacday madaafiic xilli uu socday dagaal xooggan oo dowlada iyo AMISOM ay uga soo horjeedeen kooxda Shabaab.
Dhismaha shirkadu degnaneyd ayaa waxa ay tahay daar dheer, waxaana lashegay in kooxda Shabaab ay u fuuleen in ay ka dagaalamaan taas oo keentay in madaafiic xooggan oo qalabka wax yeeleysay ay ku dhacdo.
Maqnaanshaha qadkaasi ayaa waxa uu cariiri geliyay magaalada Muqdisho, maadama inta badan dadka adeegsada internetka inta badan ay ku shaqeysanayeen qadka Global Internet.